Cockapoo: Ọ bụ nkịta kwesịrị ekwesị maka gị? - Reeddịrị
Cockapoo: Ọ bụ nkịta kwesịrị ekwesị maka gị?
The Cockapoo bụ ihe a ma ama Poodle mix (ma ọ bụ Doodle) nke a hụrụ n'anya maka ya omume enyi na N'ụbọchị nke abụọ, mara mma anya.
Ha nwere ike ịbụ ndozi-elu , na ụfọdụ ndị na-ahapụ ha n'ihi mkpa ha. Mana iji ezigbo ihe ọmụma gbasara ịzụlite ha, ị ga - ejide n’aka inye enyi gị na - ewe iwe ogologo ndụ na obi ụtọ.
Gụọ na ịmatakwu banyere ọmarịcha Doodle a wee bido ịmụ banyere otu esi elekọta Cockapoo nke ọma!
Mmalite nke Cockapoo
Njirimara anụ ahụ nke Cockapoo
Kedu ihe bụ ọnọdụ nke Cockapoo?
Otu esi elekọta Cockapoo
Ahụ ike gị Cockapoo nwere ike ịnwe
Dị dị iche iche dị ka Cockapoo
Ebee ka m nwere ike ịzụta Cockapoo?
Ndi Cockapoo bu nkita kwesiri gi?
A makwaara dị ka Cockapoodle, Cockadoodle, ma ọ bụ Spoodle, Cockapoo bụ mkpụrụ nke a Ihe egwuregwu ụmụaka na a Cocker Spaniel .
Dị ka otu n'ime nkịta ndị kasị ochie na-emepụta ejiji, ụdị osisi a dị na United States kemgbe afọ ndị 1950.
A na-akpọ Cocker Spaniel-Poodle mix kpọmkwem dị ka a nkịta siri ike ma dị ala nwere ezigbo obi. Ndị na-azụlite bekee anaghị elekwasị anya na ịme nkịta mara mma; kama, ha butere nkịta ahụ ike na ụdị mmadụ.
Na Cocker Spaniels nwere ọdịdị dị ụtọ, nke ịlaghachi azụ na Poodles bụ ndị mmadụ na-elekwasị anya, ọmarịcha Cockapoodle na-atọ ụtọ n'ezie.
Ọpụpụ, egwuregwu Poodle
Bred dị ka nkịta na-achụ nta, a na-eji Poodles eme ihe mgbe mgbe iji kpochapụ nsị na oke ọhịa ma weghachite mmiri mmiri maka ndị nwe ha.
N'ihi na ha na-mgbe nkecha nke edozi isi, ha na-enye ihe an dị mpako ma ọ bụ na-asọ oyi vibe, na-ele anya dị ka nkịta nkịta na-achọ ọgwụgwọ pụrụ iche.
Agbanyeghị, egbutu nke Poodle’s fur bụ n’ezie iji nyere nkịta aka ịme ngwa ngwa ma kpuchido akụkụ ahụ ya na oyi nke mmiri ahụ.
Ewezuga ịkpụ ntutu anya ha, a maara Poodles maka ha ọgụgụ isi na ịnụ ọkụ n'obi ime ndị nwe ha obi ụtọ. Ha bụ Nwa nkịta mara nke abụọ n'ụwa , yabụ ịzụ ha bụ ikuku.
Poodles bụkwa otu n'ime ụdị ụdị enyi kachasị mma, n'ihi ekele ha si dị ka ndị na-achụ nta. Ha anụ anụ na-agbanye gburugburu obere anụmanụ dịka nwamba na nnụnụ.
Onye nwere obi ebere, onye hụrụ n'anya Cocker Spaniel
Okwu a bu 'Cocker Spaniel' nwere ike izo aka na udiri anumanu abuo di iche: the Onye America Cocker Spaniel na Bekee Cocker Spaniel . A na-ewere ha abụọ dị ka otu ìgwè ruo na narị afọ nke 20.
Ma ndị America ma ọ bụ Bekee, a na-azụ nkịta ndị a enyi dinta nakwa. A na-akpọ Cocker Spaniels aha ya nke ọma n'ihi na amaara ha maka ịchụ nta.
Bekee Cocker Spaniel
A maara nkịta ndị a maka ịdị nwayọọ nwayọọ ha. N'ezie, AKC's ọkọlọtọ izu n'ihi na American Cocker Spaniel na-ekwu na ezigbo nkịta nke ụdị ahụ ga-abụ ' enwere onwe na obi ụtọ '.
A na-ahụkarị ụdị American dị iche iche, maka ogologo ntị ya na anya ya.
Egwuru egwu ma nwee obi ụtọ , Cocker Spaniels na Poodles nwere mmasị iso ezinụlọ ha nọrịa, na-eme nkịta ndị a ka ha bụrụ ezigbo ezigbo anụ ụlọ. Ndị enyi ha na-eme enyi na-emekwa ka ha bụrụ nhọrọ dị mma maka ndị nwe nkịta oge mbụ.
Àgwà ndị a mechara bụrụ nke pụtara ìhè na Cockapoos.
Ndị isi klọb ndị amachibidoro Cockapoos?
N'ihi na ọ bụ crossbreed, a naghị anabata Spoodle n'ụzọ doro anya site na isi klọb nkịta dị ka American Kennel Club na United Kennel Club.
Otú ọ dị, ọtụtụ ndị na-azụ ihe na-achọ iji nweta ọnọdụ dị ọcha maka ngwakọ a site na ịzụlite ọtụtụ agbụrụ.
Ka ọ dị ugbu a, enwere klọb atọ dị maka ngwakọ ndị a na ndị a bụ:
Cockapoo Club nke America (1999)
CCA na-anwa ịmepụta ma gbaa ụkpụrụ ozuzu na-agbanwe agbanwe site na ịzụlite ọtụtụ agbụrụ (n'iji Cockapoodles abụọ dịka nne na nna) kama ịmepụta ọgbọ Cockapoos (Spoodles na Poodles na Cocker Spaniels dị ka ndị nne na nna).
Ha kwenyere na ozuzu agbụrụ ga-enyere aka n'ịmepụta Cockadoodle àgwà na-agbanwe agbanwe ma na - ebute nkịta “na - akụpụta eziokwu” (okwu nke pụtara na mkpụrụ ahụ ga - enwe ụdịrị amụma, dị ka nkịta dị ọcha).
Club American Cockapoo (2004)
Klọb a anaghị eme ozuzu ọtụtụ agbụrụ. Kama nke ahụ, ha zụlitere Spoodles nke mbụ site na iji Poodles na Cocker Spaniel nke na-agafe ụkpụrụ ụdị AKC na CKC.
Akwụkwọ ndekọ aha Cockapoo nke North America (1999)
NACR na-elekwasị anya n'ịkwalite na ime ka Cockapoo bụrụ ụdị nwere nzube ma baa uru.
Dịka akụkụ nke mkpọsa ha, ha na-enye asambodo maka Cockadoodles nke bụ ngwaahịa nke mbụ site na ọgbọ nke isii.
Cockapoo zuru oke nwere ike ịbata nha dị iche iche , tumadi dabere na size nke Poodle nne na nna na-eji maka ozuzu.
Teacup na Toy Cockapoos bụ ndị pere mpe nke ụyọkọ ahụ. The Teacup dịgasị iche iche na-atụle erughị 6 pound (2.7 n'arọ) ma guzo erughị 10 sentimita asatọ (25 cm) n'ịdị elu, ebe Toy Cockapoo dị gburugburu 10 sentimita asatọ (25.4 cm) n’ogologo ma tụọ n'okpuru 12 pound (5 n'arọ)
Teacup Cockadoodles na-abụ ihe muscular karịa Tomụaka.
Site na Pọtụl pere mpe maka nne na nna, Miniature Cockapoo na-eri ihe 13 ruo 18 pound (5 ruo 8 n'arọ) na-abụkarị 11 ruo 14 sentimita asatọ (27 ruo 35 cm) ogologo.
Obere Cockapoo ( isi mmalite )
Varietydị kachasị dị iche iche bụ Standard ma ọ bụ Maxi Cockapoo, nke a na-azụ site na Standard Poodle. Dị ọkọlọtọ nke obe a dị arọ karịa kilogram 19 (8 n'arọ) ma guzo dịkarịa ala 15 sentimita asatọ (38 cm) ogologo.
Ihe obula ha buru, otutu Spoodles na enwe ogologo uwe. Dabere na mkpụrụ ndụ ihe nketa nke nne na nna kachasị achịkwa, ntutu isi ha nwere ike ịbụ edozi ma ọ bụ na-agbachi agbagọ .
Mgbe ọ na-abịa uwe uwe, Cockadoodle nwere ike ịbịa na oji, tan, ọbara ọbara (auburn ma ọ bụ aprịkọt), ude, ọcha, ọlaọcha, ma ọ bụ roan. Fọdụ n'ime ụdị obe a nwekwara uwe mkpuchi, amamịghe, ma ọ bụ nke jikọtara ọnụ.
Ngwakọta Poodle-Spaniel ketara àgwà kacha mma nke ndị mụrụ ha. Ọtụtụ n'ime ngwakọ ndị a nwere udo, ịhụnanya nke ahụ na-eme ka ha bụrụ ezigbo nkịta na nkịta ezinụlọ.
Ha na-a reụrị ọvelụ n'ihu ezinụlọ ha. Ha ga-ahụ ha n'anya ịnọnyere gị nke ukwuu nke na ha ga-ata ahụhụ nkewa nchegbu ọ bụrụ na ịhapụ ha naanị ruo ogologo oge.
Na ha jiri mmụọ Àgwà, nkịta ndị a na-emekwa nke ọma na ụmụaka. Cockapoodles ga-adị njikere maka oge egwuregwu.
Ma dị ka ihe egwuregwu ọ bụla ọzọ na nkịta ndị nwere obere obere, ndị nwe ha kwesịrị ịkpachara anya mgbe ọ bụla ịhapụ Cockapoos a lekọtaghị ya anya gburugburu obere ụmụaka. Mụaka na-amụ ije nwere ike ịbụ ndị ntule na akpachapụghị anya, ha nwere ike mebie nkịta n'amaghị ama na ntụgharị ihu.
Ngwakọta ndị a Spaniel-Poodle na anụ ụlọ ndị ọzọ nọ n'ụlọ, yana nwamba na nkịta ibe ya. Just ga-akpachapụ anya ma nwee ha gburugburu nkịta buru ibu ndị nwere ike ịnwa ịchị.
Dịka anyị kwuru, obe ndị a na-achọkarị nwekwuo nlezianya na nlekọta jiri ya tụnyere nkịta ndị ọzọ. Mkpa ndị a pụrụ iche bụkarị n'ihi obere obere Spaniel-Poodle hybrid na akwa mkpuchi.
Site na ejiji na nri iji mmega ahụ na ọzụzụ, nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma banyere mmezi kwesịrị ekwesị maka Cockapoo gị.
Na-emekọ ihe gbasara mkpa Cockapoo
Iji gbochie tangles na matting , ntutu gị nke Spoodle kwesịrị ịdị bupụrụ ma ọ dịkarịa ala otu ugboro kwa ụbọchị .
Ihichapu ya mgbe niile na-enyere aka mee ka uwe ya na-enwu gbaa, dị mma, ma dị ọcha, nke dị mkpa n'ihi na uzuzu nwere ike ịbakọta na kootu ahụ ma kpalite ihe nfụkasị ahụ.
Themsa ahụ ha anaghị abụ ihe amamihe ọkachasị ebe ọ bụ na Cockapoos anaghị enwe isi isi. Ọtụtụ mgbe, obe a na-esiteghị isi. Ha na - eme nke a site na Poodle, nke amara ya ịdị ọcha na uwe ya na-adịghị awụfu.
Enwere ike ime oge ịsa ahụ naanị otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n’ọnwa ma ọ bụ naanị mgbe ọ dị mkpa. Nke a na-enyere aka ichekwa mmanụ nkịtị nke na-enyere aka mee ka uwe ha dị nro. Na mgbakwunye, ịsa nkịta gị ọtụtụ oge nwere ike ịme nkụ ahụ.
I nwekwara ike inye Spoodle gị mkpụbelata ma ọ dịkarịa ala otu ugboro n'ọnwa ịchekwa uwe ya ogologo ogologo. Ejiri ntutu dị gburugburu anya ha ka edozi ka ha wee nwee ike ịhụ ụzọ nke ọma.
Lelee vidiyo a na-enye aka na otu esi egbutu ntutu na ihu Cockapoo:
Ntị nhicha dịkwa ezigbo mkpa nke crossbreed a, onye nwere ogologo ntị ogologo. Floppy ntị ndị ọzọ ewekarị na buildup nke mmiri na waks , bụ nke na-agba ume njupụta nke nje bacteria ma na-eme ka ohere nke ibute ọrịa dịkwuo elu.
Ọ bụrụ n’ịchọpụta na Cockapoo gị na-efufe isi ya oge ọ bụla ma ọ bụ na-apịlịchara ntị ya ntị, ọ nwere ike ịbụ oge ị ga-elebanye anya n’ime ntị ha.
Jide n'aka na ịlele ma hichaa ntị ha nwayọ ma ọ dịkarịa ala otu ugboro n'izu , na-eji bọọlụ owu na ihe nhicha a tụrụ aro.
E wezụga ntị, ezé nkịta gị kwesịkwara ịbụ kpochara ọ dịkarịa ala otu ugboro n'ụbọchị. Ihichapu nkịta nkịta gị mgbe niile na-eme ka oghere na ọrịa na-efe efe ma na-eme ka ume dị ọhụrụ.
Nlekọta eze dị mkpa karịsịa maka Teacup na Toy Cockapoos. Ha obere ọnụ mee ka ha nwekwuo nsogbu eze.
N'ikpeazụ, ị kwesịrị ewepụ mbọ ha opekempe otu ugboro n'ọnwa . Dogsfọdụ nkịta adịghị mkpa ọtụtụ mkpụcha mbọ n'ihi na mbọ ha na-agbada site na ịgba ọsọ na mgbatị siri ike, mana nke ahụ abụghị ikpe maka Spoodle, nke na-abụkarị nkịta ụlọ.
Ntuzi ntu nwere ike ịdị ize ndụ ma ọ bụrụ na ịmee ya ma na ịnweghị ahụmịhe ọ bụla, yabụ egbula oge ịrịọ maka vet gị ma ọ bụ enyemaka nke onye na-edozi gị.
Cockapoos bụ n'ezie hypoallergenic?
Dị ka ọtụtụ Doodles, a na-akpọkarị ngwakọta Poodle-Spaniel dị ka nkịta hypoallergenic. Otú ọ dị, eziokwu bụ na e nwere enweghị ụdị nke bụ n'ezie 100% hypoallergenic .
Cocker Spaniel-Poodle mixes nwere uwe mkpuchi na-agbafu obere aji nke aji na dander, ma ọ bụ mkpụrụ ndụ akpụkpọ nwụrụ anwụ. A na-ejide ajị anụ ha wụsara na ntutu ntutu ha karịa ịsegharị na gburugburu.
Na uwe ha na-awụfu ala, a na-akpọ obe ndị a O yikarịrị ka ọ ga-ebute allergies ma ọ bụ ezigbo anụ ụlọ maka ndị na-arịa ọrịa nfụkasị ahụ .
Nri kwesịrị ekwesị maka Cockapoo
Gbalia nye Spoodle gi nri adịchaghị akọrọ kibble emere maka obere udiri anumanu - kibble a na-adi obere obere n ’ime ka odi mfe. Udiri nri nke nri gha enyere aka hichaa onu ya nile.
Ọbara Poodle nke Cockapoo na-emekwa ka ọ dị mfe nri nri . Ọka dị ka ọka na ọka wit nwere ike ịkpalite mmejọ ndị a, n'ihi ya ị ga-achọ ịjụ onye na-elekọta gị banyere itinye nkịta gị na a nri na-enweghị ọka .
Ọ bụrụ n'ịchọpụta na nkịta gị bụ onye na-eri nri, ị nwere ike ịmalite ya na nri BARF (nri biologically raw raw). Site na nri a, nkịta gị na-eri nri akpụrụkpụ na anụ tinyere mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri dị ka mkpụrụ osisi na broccoli.
Ego ole ka Cockapoo chọrọ?
Okenye Spaniel na Poodle mixes kwesịrị inye nri 1 cup nke nkụ nkịta nri kwa ụbọchị, kewaa abụọ nri.
Agbanyeghị, ị ga-atụle ogo ya na ọkwa ọrụ gị mgbe ị na-ekpebi ego ole ị ga-eri Cockapoo gị.
N’iburu etu ha si dị, obea ndị a nwere ike chọ obere nri mana ha ga-achọ calorie ndị ọzọ kwa paụnd nke ịdị arọ ahụ iji kwado metabolism ha.
N'agbanyeghị, mkpa calorie dị ha mkpa, zere na-eri nri Cockadoodle gị. Dị ka obere nkịta niile, ọ na-adịkarị mfe oke ibu , karịsịa ebe ọ bụ na ha anaghị arụ ọrụ dị ka ụdị ndị ọzọ.
Ikwesiri iji anya gị hụ oke ukwu gị mgbe ị na-eleda nkịta gị anya. Ọkpịrịga ya kwesịkwara ịdị nfe (ma ọ gaghị ahụ) n'okpuru ajị anụ ya.
Mmega ahụ Cockapoo chọrọ
Akụkụ nke ilekọta Cockadoodle nke ọma na-enye ya mmega ahụ ọ chọrọ. Exercisemega ahụ na - eme ka nkịta gị zuru oke mkpali anụ ahụ na nke uche . Ọzọkwa, oge egwuregwu na-eme ka nkekọ dị n’etiti gị na anụ ụlọ gị sie ike.
Ozi ọma ahụ bụ na Cockapoos nwere naanị agafeghị oke ike larịị . A ije kwa ụbọchị na-adịgide adịgide ọ dịkarịa ala minit 15 zuru mmega ahụ maka obe a, ọkachasị maka ụdị Teacup na Toy.
Obere na Standard Spoodles nwere ike ịnụ ụtọ mmega ahụ nke siri ike karị, dịka igwu mmiri ma kpọtara . Egwuregwu agbapụta bụ ụzọ dị mma iji mee ka nkịta gị na-agagharị ma mee ka uche ya dị nkọ, ọkachasị nye nketa ịchụ nta ya.
Nnukwu Spoodles nwekwara ike ịnụ ụtọ ọzụzụ agility na egwuregwu canine ndị ọzọ. Nkịta gị ga-anụ ụtọ ọzụzụ maka mmemme ndị a ọ bụghị naanị maka mkpali nke uche kamakwa maka oge ọ ga-anọnyere gị.
Ọbụna egwuregwu ime ụlọ dị mfe dịka ịchụ nta akụ ga-ejide obe Spaniel-Poodle gị hapụ ike gwụ , na-egbochi omume ndị na-ebibi ihe.
Cockapoos ọ dị mfe ịzụ?
N'ihi nketa Poodle ha, ọtụtụ nkịta ndị a bụ ikuku ịzụ.
Akụkọ banyere ndị mụrụ ha dịka ndị enyi ịchụ nta na-emekwa crossbreeds a nwekwuo ọchịchọ irube isi n'iwu .
Ọzụzụ kachasị dị irè mgbe nkịta gị bụ nwa nkịta. Bido kụziri ya ezigbo agwa ozugbo ị kpọlatara ya ụlọ.
Oge nkuzi dị mkpirikpi mana oge niile ga - enyere aka mee ka pup gị ghara inwe ike gwụrụ ma ọ bụ dọpụ uche gị.
Dị ka ya na ọtụtụ nkịta, nkwalite dị mma na-arụ ọrụ ebube na Poodle-Cocker mixes. Debe ihe dị ka cubes nke ọkụkọ ọkụkọ ma ọ bụ imeju ma jide n'aka na ị na-eto nkịta gị oge ọ bụla ọ gbasoro iwu.
Mmekọrịta mmekọrịta dị oke mkpa n'ịzụ nkịta gị. Ozugbo nwa obere nwa gị natara ya ịgba ọgwụ mgbochi , ị nwere ike were ya gaa n’ogige nkịta ka ọ were ya na anụmanụ ndị ọzọ ịnọ.
Leash-ọzụzụ ga-enye aka maka ịchịkwa Cocker Spaniel-Poodle ngwakọ gị mgbe ọ chọrọ ịgbaga n'ihu gị na ịchụ ụmụ anụmanụ pere mpe. Nwere ike ịkụziri nkịta gị ka ọ dịrị mma na olu akwa mgbe ọ ka na-eto eto.
Nsogbu akparamàgwà na Cockapoos
A crossbreeds bụ nkịta ndị na-ahụ n'anya ka ha na ezinụlọ ha nọrịa. Nke a bụ ihe kpatara ọtụtụ Spoodles ji ata ahụhụ nkewa nchegbu , nke na-edugakarị n'omume na-ebibi ihe na ịkwa ụja gabigara ókè.
Nkuzi ọzụzụ bụ ụzọ dị mma iji hụ na nkịta gị dị jụụ ma ọ bụrụ na ị ga-ahapụ ụlọ obere awa. Igbe ahụ na-enye Spoodle ebe nchekwa ebe ọ ga-ezu ike.
I nwekwara ike ịhapụ nkịta gị na ya ihe egwuregwu ụmụaka na ụfọdụ ọgwụgwọ ka o wee nwee ike ịna-arụ ọrụ mgbe ị na-apụ. N'ụzọ dị otú a, ị gaghị alọta ụlọ iji bibie kapeeti ma ọ bụ ihe ndina ihe ndina na ndị agbata obi gị agaghị eme mkpesa banyere mkpọtụ ahụ.
Cockapoo enwere ike ibi n'èzí?
Dị ka ụmụ Cocker Spaniels na Poodles, nke bụ isi abụọ n'ime nkịta nkịta kachasị mma n'ụwa, Cockapoos na-eme nke ọma mgbe ha dị ndụ. n'ime ụlọ .
Ha bụ nkịta zuru oke maka ndị bi n'ụlọ n'ihi oke ha. Ha na- nwee mmasị ịbịaru ụmụ mmadụ ha nso na-enwekarị ikewapụ iche, n'ihi ya, ha na-enwe obi ụtọ mgbe ha nọ n'akụkụ gị.
Ime ka ha biri n’azụ ụlọ adịghị mma. Dogsmụ nkịta a pere mpe agaghị adị ndụ n'èzí, yabụ gbaa mbọ webata ha na njedebe nke ụbọchị.
Ha na-eme, Otú ọ dị, na-enwe mmasị ịnọ n'èzí maka oge igwu egwu. Mgbe ị na-apụ na-ekpori ndụ na ihu igwe ọkụ, gbaa mbọ hụ mee ka nkịta gị nwee mmiri ya na mmiri ohuru.
N'ime ọnwa oyi, enwere ike ịhapụ ha ka ha gwuo na snow. Naanị cheta iwepụ snow na-arapara na ụkwụ na afọ ha. I nwekwara ike iji a sweta ma ọ bụ jaket iji chebe ya pụọ ​​oyi.
A Cockapoo nwere nkezi afọ ndụ Afọ iri na anọ ruo afọ iri na asatọ , nke bụ ndu ndụ nkịtị maka ọtụtụ obere nkịta.
Agbanyeghị, ị ga-amarịrị na ngwakọ ndị a na-enwekarị nsogbu ahụike na-emetakarị ndị mụrụ ya. Nyocha ahụike n'oge nwere ike inye aka ịchọpụta likeli likeli nke ọrịa ndị a na Cockapoo pups.
Ndị a bụ ụfọdụ ọnọdụ ahụike Poodles na Cocker Spaniels na-adịkarị:
Nke a anya anya na-enye anya nkịta anya igwe ojii, na-emetụta ya ọhụụ. Enwere ike ịgwọ ya site na ịwa ahụ na ọgwụ kwesịrị ekwesị iji meziwanye nkịta nkịta gị.
Nke a bụ nsogbu ikpere nke a na-ahụkarị na Cockapoos na obere nkịta ndị ọzọ. Ọ bụrụ na eriri gị na-arịa okomoko patellar, ọ nwere ike ịnwe ihe mgbu site na ikpere ikpere na-amị ma na-apụ.
Ọnọdụ a na-eme mgbe hips adịghị eru mmepe zuru oke. Hip dysplasia nwere ike ime ka mmegharị ụkwụ na-egbu mgbu.
Dịka anyị kwuburu na mbụ, Cockapoos nwere ike ịnwe ihe nfụkasị, kwa, dịka nne na nna ha Poodle. Baths na grains mgbe nile bụ ụfọdụ ihe na-akpatakarị nfụkasị ahụ na nkịta ndị a.
A na-ekwu na Cocker Spaniels na-arịa ọrịa imeju na-enwekarị mmetụta dị ka poruntystemic shunt, ịba ọcha n'anya, na ọrịa cirrhosis. Spoodle gị nwere ike ketara ọnọdụ a gbasara nsogbu imeju ndị a.
Spoodles na-adịkarị mfe ibute ọrịa ntị n'ihi ntị ntị ha. Jide n'aka na ị na-elele nkịta nkịta gị oge niile maka àjà ma ọ bụ nrụpụta oke mmiri.
P na-agba agba Retinal Atrophy (IHE)
Nke a bụ ọnọdụ eketa ebe nkịta ji nwayọọ nwayọọ na-ahụ ụzọ n'ihi ndalata nke retina.
Nzọụkwụ mbụ ị ga - eme maka nsogbu ahụike ndị a nwere bụ ịnwe puple-spaniel pup enyocha ahụ ike dị ka n'oge dị ka o kwere omume. Dị ka o kwesịrị, onye na-azụ ihe kwesịrị ịnwe nwa nkịta a nwalere maka ọnọdụ mkpụrụ ndụ tupu ịtọhapụ ya na nlekọta gị.
Ndị na-azụ anụ ga-enwe ike igosi gị ikikere ahụike site na otu n'ime ụlọ ọrụ ndị a:
Ntọala Orthopedic maka anụmanụ (OFA) - maka nsogbu nkwonkwo na nkịta gị, dị ka dysplasia hip na gwiwarpysia dysplasia. Ntọala a na-enyekwa ule maka hypothyroidism na von Willebrand ọrịa.
Mahadum Auburn - maka thrombopathia , nke bụ ọgbụgba platelet a na-eketa ebe mkpụkọ ọbara na-adịkarị nke na-agaghị ekwe omume ma ọ bụ na-eme n'ụzọ dị nwayọ nwayọ.
Inelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Anya Anya (CERF) - maka ịgba akaebe na anya nkịta gị dị mma.
I kwesịkwara iburu n’uche na afọ nke nne na nna ya nwere ike imetụta ahụike nke nwa nkịta gị.
Akwado ndi na-azuta umu nkita 2 afọ ma ọ bụ obere . Imirikiti ọrịa ndị a hụrụ na nkịta anaghị apụta ruo mgbe ọ ruru afọ 2 ma ọ bụ 3.
Kedukwanụ banyere ume ike ngwakọ?
N'ihe banyere ụdị obe, okwu a bụ ' ngwakọ ngwakọ '(Ma ọ bụ' heterosis 'ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta sayensị banyere ya) na-atụbakarị. Echiche a na-ezo aka na mma mma nke àgwà nkịta ngwakọ na ahụ ike zuru ezu n'ihi usoro ịgafe.
Ọtụtụ ndị na-azụ ihe na-eji ike ngwakọ dịka akụkụ nke ahịa mgbe ha na-agba ndị mmadụ ume ka ha nweta nkịta na-emepụta kama nke nkịta dị ọcha. Nke a emeela ka enwere echiche na-ezighi ezi na agbụrụ niile na-enwe ahụ ike ka mma.
Eziokwu bụ na ọ bụrụ na mkpụrụ ndụ ihe nketa nke ụmụ nkịta na-anọgide n'otu oge, ndị ọgbọ ndị na-esote agaghị enwe otu ụdị ngwakọ ahụ ọzọ. Ha ga-akwụsị na-emepe ọrịa na aka ha.
Nwekwara ike ịmasị ịmata ndị nkịta ndị ọzọ na-emepụta ihe nke ezinụlọ Doodle.
Might nwere ike ịmegharị ụfọdụ n'ime ha dị ka Spoodle n'ihi na ndị a na-eme nkesa na-ekerịta ụfọdụ. Otú ọ dị, nke ọ bụla n’ime ụdị ndị a nwere ụdị atụmatụ ha.
Cavapoo ( isi mmalite )
Na Cavapoo bụ ngwakọta nke Cavalier King Charles Spaniel na Poodle.
Dị ka Cockadoodle, Cavapoo na-abịa nha dị iche iche, dabere na nha nke nne na nna Poodle ya.
Nkịta abụọ ahụ nwere Uwe mkpuchi obere ala , ma, Doodles abụọ a nwere ọdịiche ha ma a bịa n’ile ha anya.
Cavapoo na-achọkarị obere mmezi , dị ka ntutu isi ha adịghị mkpa ịchacha ugboro ugboro.
Spoodle na Cavapoo ha abụọ nwere akwa nwere ogologo, ogologo mkpuchi (ma ọ bụ gbagọọ agbagọ ma ọ bụ kwụrụ ọtọ). Otú ọ dị, ntutu isi nke Spaniel-Poodle na-abụkarị na-eto na ngwa ngwa , ya mere, ha ga-achọkwu nleta na-edozi ahụ.
Bredị abụọ ahụ nwere ọgụgụ isi, n'ihi nne na nna Poodle ha. Ma abia na ọzụzụ, Cavapoo di nfe karie uzo Poodle-Cocker.
Cavapoos na-adị njikere ma na-a atta ntị, mana ha anaghị achọsi ike igwu egwu ọtụtụ oge. Uche ha na ọgụgụ isi ha na-eme ka ha nwee ọfụma na ọzụzụ.
Omume ngwakọ nke Cavalier-Poodle na-abụkarị oyi. Ha nwere ogo ike, ha ga-enwekwa obi ụtọ iji nọrọ naanị ụbọchị niile ma soro ụmụ mmadụ na-akpakọrịta.
Cockapoo megide Maltipoo
Maltipoo ( isi mmalite )
Na Maltipoo bụkwa otu n'ime nkịta ndị mmadụ na-agbagwoju anya maka ngwakọ Poodle na Spaniel.
Maltipoo bụ ụmụ fluffy nke Maltese na Poodle.
Cocker Spaniels n'ozuzu ha buru ibu karịa Malteses, yabụ, na-agwakọta Spaniel-Poodle ibu jiri ya tụnyere obe Maltese-Poodle.
Enweghị nkwa na nke a, agbanyeghị, n'ihi na ọ ga-adabere mgbe ụfọdụ na Poodle ha sitere na ya.
Mixeddị abụọ agwakọtara dị maara ihe, nwee mmetụta ịhụnanya, ma na-eguzosi ike n'ihe nye ụmụ mmadụ ha.
Cockapoos na Maltipoos nwere ọchịchọ nke ịrapara n'ahụ ezinụlọ ha, n'ihi ya, ha na-enwe nchekasị nkewa mgbe ọ bụla naanị ha nọrọ ogologo oge.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata nke kachasị mma dịka anụ ụlọ, azịza anyị n’eziokwu bụ na ịgaghị emehie na otu n’ime ha.
Abụọ Doodles bụ obere, nkịta dị ala nke na-egwu egwu ma na-ahụ n'anya. Ha ga eme ezigbo anu ulo na ndi enyi.
Ngwakọta Goldendoodle bụ nke obe Ntughari ọla edo na Poodles. Goldendoodles nwere ike ịdị iche site na Poodle na Spaniel hybrids site na nha ha - onye mbu toro ogologo ma sie ike karịa nke ikpeazụ.
N'ihi na mkpụrụ ndụ ihe nketa Poodle na-esikwu ike na Doodles, ma ndị obe obe nwere Poodle’s fluffy, loosely curled, single-layered coats. Ha nwere ike bia na ude nke ude, aja aja, oji, ma obu agwakọta abuo ma obu ato nke agba ndia.
Goldendoodles bụ hypoallergenic , kwa, dika Cockapoos.
Goldendoodles bụ nkịta nwere omume enyi, dị ka Golden Retriever. Offọdụ n’ime ha agaghị ọbụna iti mkpu na ndị bịara abịa na-abịa. Ha na-anabata onye ọ bụla site na ọdịdị na-ekpo ọkụ ha.
Ha bụ nwee obi ụtọ ma nwee egwuregwu, Ọzọkwa. Ha na-eme nkịta ezinụlọ dị ukwuu dị ka osisi ndị a na-eme nke ọma yana ụmụaka.
Ngwakọta Poodle-Spaniel, n'aka nke ọzọ, nwere ike ịbụ ntakịrị nwekwuo mmetụta ma ọ bụ mpaghara gburugburu ndị ha na-amaghị. Briddị ngwakọ ndị a dị ntakịrị ga-achọ ka uche gị dị ukwuu nke na ha nwere ike ọ gaghị enwe obi ụtọ ịkọrọ onye ọzọ.
.B. ezigbo onye ọrụ Ọ ga-abụ ụzọ kacha mma ị ga-esi nweta puppy Cockapoo. Agala naanị iso onye na-azụ ihe izizi ị hụrụ n'ịntanetị.
N'ihi ewu ewu nke ndị na-emepụta nkịta dịka Cocker Spaniel-Poodle mix, ọtụtụ ndị na-azụ ihe na-aga omume na-adịghị mma naanị iji mee ngwa ngwa.
Jide n'aka na ị ga - esoro onye na - azụ ihe nwere ike ịza ajụjụ gị niile gbasara pup na nne na nna ya, ọkachasị mgbe ọ gbasara ahụike. Ezigbo onye na-azụ ihe agaghị enwe nsogbu na ịhapụ gị gaa na ụlọ ya ka ị nwee ike soro nwa nkita na mmetụta ya tupu ị were ya laa.
Ọnụ ego maka Cockapoo dị gburugburu $ 1,100 ka $ 2,000 .
E depụtara ndị na-azụ Cockapoo ndị a na weebụsaịtị Cockapoo Club of America dị ka ndị otu na-azụ anụ, nke pụtara na ha jikọtara ya na Usoro CCA Breeder nke ụkpụrụ omume.
Nnukwu Cockapoos (California)
Cockapoos nke Cathy (Florida)
Erin’s New England Cockapoos (Massachusetts)
Sugar na ose Cockapoos (South Carolina)
Napụta ma ọ bụ were Cockapoo
Ọtụtụ ndị na-azụ anụ ụlọ anaghị ewepụta oge iji mụta maka mkpa nkịta nke nkịta ha. N'ihi nke a, ọtụtụ n'ime anụ ụlọ ndị a nwere ike ịba ebe obibi ma ọ bụ ebe nchekwa .
Y’oburu n’ichoghi iwe ulo nkita ochie , gịnị ma ị ga-anabata Cockadoodle toro eto kama? Ọ dị ọnụ ala karịa, ụgwọ ụgwọ nnabata na-efu na $ 300.
Ọbụghị naanị na ị ga - enwe ike ịchekwa ego na-na nkịta , ma ị ga-enyekwa crossbreed gbahapụrụ ebe obibi na-ahụ n'anya.
Lelee òtù ndị a na-azọpụta ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịnabata Cockapoo:
Mgbapụta Carolina Poodle
Spoodles chọrọ a onye nwe ya onye nwere ike inye ha nlebara anya pụrụ iche ha chọrọ.
Ha nwere uwe ogologo ha chọrọ edozi kwa ụbọchị na obere aru ndị chọrọ nlekọta na-adịghị mma.
Maka ịgbalị iji ụdị nlekọta ya dị elu, Spoodle ga-akwụghachi gị ụgwọ na iguzosi ike n'ihe na mkpakọrịta.
Cockapoos nwere a ịhụnanya, egwuregwu nke ahụ na-eme ha nnukwu anụ ụlọ ma ọ bụ maka ndị otu ma ọ bụ ezinụlọ.
The Cockapoo bụkwa otu n’ime obe obe nwere ọgụgụ isi ị ga - ezute, yabụ jiri ya zụọ ha nkwalite dị mma ga-adị mfe.
Y’oburu na ibu onye nwe nganga nke Cocker Spaniel-Poodle mix, kowaa anyi ihe omumu gi! Hapụ ikwu n'okpuru!
Bernedoodle Dog Breed Information, Eziokwu, Ọnọdụ & Nha
Amaghi banyere Red Heeler? Nke a bụ ihe I Kwesịrị Knowmara
Ottlọ nyocha Rottweiler Lab: Nchịkọta rotdị Nlekọta Dog nke Complelọ
Ndị Goberian: Eziokwu na-adọrọ mmasị banyere Golden Retriever na Husky Mix
Maltese: Obere Nkịtị Hypoallergenic Companion Dog
Mini Golden Retriever Breed Profile: Size, Ahịa na More ...
Uhie Ohia Red Heeler Dog: Mmetụta, Ọdịdị & Ndị Nzuzo
Ihe niile I Kwesịrị Tomara Banyere Poag Beagle
Aha ụlọ nyocha Yellow: 180+ Aha kachasị mma ANY L Hụrụ n’anya maka ụlọ nyocha
Eriri Na-acha Wave Dachshund: Puppies, Ndị na-azụ anụ & Nduzi Nduzi
Cockapoo: Ihe niile anyị hụrụ n’anya gbasara Cocker Spaniel Poodle Mix
otú nnukwu bụ toud poodles
ngwakọta husky na imi na -acha anụnụ anụnụ
foto ihe osise na -acha anụnụ anụnụ
ego ole ka imi na -acha ọbara ọbara bara